Fernando José Torres Sanz ama Fernando Torres (Fuenlabrada, 20 maarso 1984), waa laacib oo la ciyaaro kooxda AC Milan iyo kooxda wadankiise ee Spain.
Torres ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ku bilaabay Atlético Madrid, isagoo horumarinaya qaab ciyaareedkooda da'da yar ee kooxda koowaad. Wuxuu kulankiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda u saftay 2001dii, waxaana uu ku dhameystay waqtigiisa kooxda isagoo leh 75 gool 174 kulan oo La Liga ah. Ka hor kulankiisii ​​ugu horeeyay ee La Liga, Torres wuxuu ciyaaray labo xilli Segunda División ee Atlético, isagoo u saftay 40 kulan wuxuuna dhaliyay 7 gool.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Torres&oldid=223209"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Nofeembar 2021, marka ee eheed 23:15.